Shuruudaha isticmaalka - Richardmille.to
Cusboonaysiinta ugu dambeysay: July 08, 2020
Fadlan si taxaddar leh u aqri shuruudahan iyo shuruudahan ka hor intaadan adeegsan Adeeggeenna.
Erayada ay ku qoran yihiin xarfaha bilowga ah waxay leeyihiin macnayaal lagu qeexay shuruudaha soo socda.
Qeexitaannada soo socdaa waxay lahaan doonaan macno isku mid ah iyadoon loo eegayn inay ka muuqdaan keli ama qaab ahaan.
Ujeeddooyinka Shuruudahaan iyo Shuruudaha:
affiliate macnaheedu waa hay'ad maamusha, ay maamusho ama ay si guud ula socoto dhinac, halkaas oo "xakamaynta" macnaheedu yahay lahaanshaha 50% ama ka badan saamiyada, danaha sinnaanta ama dammaanadaha kale ee xaq u leh inay u codeeyaan doorashada agaasimayaasha ama maamulka kale ee maamulka.
Company (oo loo yaqaan midkoodna "Shirkadda", "Anaga", "Annaga" ama "Kuweenna" ee Heshiiskan) waxaa loola jeedaa mille richard.
Country waxaa loola jeedaa: Washington, Mareykanka
Device waxaa loola jeedaa qalab kasta oo geli kara Adeegga sida kombuyuutar, taleefanka gacanta ama kiniin dijitaal ah.
Service waxaa loola jeedaa Websaydhka.
Shuruudaha iyo Xaaladaha (sidoo kale loo yaqaan "Shuruudaha") waxaa loola jeedaa Shuruudahaan iyo Shuruudahaas oo sameysmaya dhammaan heshiiska u dhexeeya Adiga iyo Shirkadda ee ku saabsan adeegsiga Adeegga. Heshiiskan Shuruudaha iyo Xaaladaha waxaa lagu abuuray iyadoo la kaashanayo Shuruudaha iyo Xaaladaha Generator.
Qeybta saddexaad ee Adeegga Warbaahinta Bulshada macnaheedu waa adeeg kasta ama wax kasta (oo ay ku jiraan xog, macluumaad, alaabooyin ama adeegyo) ay bixiyeen dhinac saddexaad oo la soo bandhigi karo, lagu dari karo ama laga heli karo Adeeggu.
website waxaa loola jeedaa mille maaddada 'richard mille', laga heli karo https://www.richardmille.to/
Waxaad waxaa loola jeedaa qofka galaya ama isticmaalaya Adeegga, ama shirkadda, ama hay'ad kale oo sharci ah oo ka wakiil ah qofkaas oo galaya ama adeegsanaya Adeeggan, hadba sida lagu dabaqi karo.
Kuwani waa Shuruudaha iyo Xaaladaha xukuma adeegsiga Adeegan iyo heshiiska ka shaqeynaya adiga iyo Shirkadda. Shuruudahan iyo Shuruudahani waxay dejiyeen xuquuqda iyo waajibaadka dhammaan isticmaaleyaasha ee ku saabsan adeegsiga Adeeggan.
Helitaankaaga iyo adeegsiga Adeeggu wuxuu ku xiran yahay aqbalaaddaada iyo u hoggaansanaanta Shuruudaha iyo Shuruudahan. Shuruudahan iyo Shuruudahani waxay quseeyaan dhammaan booqdeyaasha, adeegsadayaasha iyo kuwa kale ee gala ama adeegsanaya Adeegga.
Adigoo galaya ama adeegsanaya Adeegga Waad oggolaatay inaad ku xidhnaato shuruudahan iyo shuruudahan. Haddii aadan ku raacsaneyn qeyb ka mid ah Shuruudahan iyo Shuruudahan markaa waxaa suuragal ah Inaadan marin Adeeggan.
Waxaad wakiil u tahay inaad ka weyn tahay da'da 18. Shirkadda uma oggolaaneyso kuwa ka yar da'da 18 inay adeegsadaan Adeegga.
Helitaankaaga iyo adeegsiga Adeeggu sidoo kale waxay kuxirantahay Aqbalitaankaaga iyo u hoggaansanaanta Nidaamka Asturnaanta ee Shirkadda. Qaanuunkayaga Khaaska ah wuxuu sharxayaa siyaasadahayaga iyo hanaankayaga ku saabsan ururinta, adeegsiga iyo shaacinta macluumaadkaaga shakhsiyeed markaad isticmaaleyso Arjiga ama Websaydhka oo kuu sheegaysa Xuquuqdaada Asturnaanta iyo sida sharciga u dhowro. Fadlan si taxaddar leh u aqri Nidaamkeena Qarsoodiga kahor intaadan adeegsan Adeegyadeena.
Adeeggeenu wuxuu lahaan karaa xiriiriyeyaal websaydhada websaydhada saddexaad ama adeegyo ay leeyihiin ama aysan shirkaddu xakamayn.
Shirkadda ma leh wax awood ah oo ay ku xakameyso, mas'uulna kama saarna mas'uuliyadda, waxyaabaha ay ka kooban tahay, siyaasadaha asturnaanta, ama ku-dhaqannnada websaydhada ama adeegyada dhinac saddexaad ah ama adeegyada. Waxaad sii qiraysaa oo oggolaatay in Shirkadda aysan mas'uul ka noqon doonin ama mas'uul ka noqon karin, si toos ah ama si aan toos ahaynba, wixii waxyeelo ah ama khasaare ah ee sababay ama lagu eedeeyey inay sababtay ama la xiriirto adeegsiga ama ku tiirsanaanta wax kasta oo ka mid ah waxyaabahaas, alaabada ama adeegyada la heli karo. ama iyada oo loo marayo websaydhyada ama adeegyada noocaas oo kale ah.
Waxaan si xoogan kuugula talineynaa inaad aqriso shuruudaha iyo shuruucda iyo siyaasadaha asturnaanta ee boggaga dhinac saddexaad ama adeegyada aad booqato.
Waanu joojin karnaa ama joojin karnaa marinkaaga isla markaaba, adigoon ogeysiis hore ama mas'uuliyad ka saarin, sabab kastooy doonto ha noqotee, oo ay kujirto xaddid la'aan haddii aad jabiso Shuruudahan iyo Shuruudahan.
Marka la joojiyo, Xuquuqdaada Adeegga Adeeggu si dhakhso ah ayey u joogsan doontaa.
Iyadoo aan loo eegin waxyeello kasta oo laga yaabo inaad la kulanto, mas'uuliyadda shirkadda oo dhan iyo mid kasta oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasheeda iyadoo la raacayo bixinta Shuruudahaan iyo Daaweyntaada gaarka ah ee dhammaan wixii aan soo sheegnay waxay ku xaddidnaan doontaa xaddiga aad adigu ku bixisay Adeegga ama 100 USD haddii aadan waxba ku iibsan Adeegga.
Ilaa iyo inta ugu badan ee loo oggol yahay sharciga lagu dabaqi karo, dhacdo kasta ma aha in shirkadda ama adeeg bixiyeyaasha ay mas'uul ka tahay wax kasta oo khaas ah, shil, aan toos ahayn, ama waxyeello ka dhaceysa wax kastoo (oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, khasaaraha macaashka, luminta xogta ama macluumaad kale, kala go 'meherad ganacsi, dhaawac shaqsiyeed, luminta asturnaanta ka timaadda ama si kasta oo laxiriirta adeegsiga ama aan awood u laheyn isticmaalka Adeegga, softiweerka dhinac saddexaad iyo / ama qalabka saddexaad ee loo adeegsaday Adeeggan, ama haddii kale laxiriira qodob kasta oo Shuruuddaan ah), xitaa haddii Shirkadda ama alaab-qeybiye kastaaba lagula taliyo suurtagalnimada waxyeelada noocaas ah iyo xitaa haddii daawadu ay ku guul darreysato ujeedkeedii lagama maarmaanka ahayd.
Gobollada qaarkood ma oggola in ka-reebitaannada damaanad-qaadka la xadiday ama xaddidaadda mas'uuliyadda shilalka shilalka ama dhibaatooyinka ka dhalan kara, taas oo macnaheedu yahay in qaar ka mid ah xaddidaadaha kor ku xusan aan lagu dabaqi karin. Gobolladan, xisbi walba masuuliyadiisa waxay ku koobnaan doontaa inta ugu badan ee sharcigu oggol yahay.
“SIDUU YAHAY” iyo “SIDA LOO HELI KARO” Diidmada
Adeegga ayaa laguu siiyaa adiga "AS IS" iyo "SIDA LOO HELI KARO" iyo dhammaan cilladaha iyo cilladaha aan lahayn dammaanad qaad noocuu doono ha noqdee. Ilaa xadka ugu badan ee la ogol yahay sida sharciga waafaqsan, Shirkadda, ayaga oo ku hadlaya magaceeda iyo ka wakiil ahaan la-hawlgalayaasheeda iyo iyaga iyo shati bixiyeyaashooda iyo bixiyeyaasha adeegga, waxay si cad u diidayaan dhammaan dammaanadaha, ha ahaadeen mid la caddeeyay, mid la sheegay, mid sharci ah ama haddii kale, marka la eego Adeeg, oo ay ku jiraan dhammaan dammaanadaha la soo koobay ee ku saabsan baayacmushtarka, u-qalmitaanka ujeedo gaar ah, cinwaan iyo ku-xadgudub la'aan, iyo dammaanado ka soo bixi kara dabcan la macaamilka, koorsada waxqabadka, adeegsiga ama ku dhaqanka ganacsiga. Iyadoo aan loo xadidneyn waxyaabaha aan soo sheegnay, Shirkaddu ma bixineyso wax dammaanad qaad ah ama wax qabad ah, mana sameyneyso wax matalaad ah nooc kasta oo Adeeggu la kulmi doono shuruudahaaga, ku guuleysan doono natiijooyin kasta oo loogu talagalay, kula jaanqaadi karo ama la shaqeyn karo barnaamijyo kale, barnaamijyo, nidaamyo ama adeegyo, ku shaqeynaya. kala go 'la'aan, la kulan waxqabadka ama heerarka kalsoonida ama qalad ha ahaado ama wixii khaladaad ama cilado ah waa la sixi karaa ama la sixi karaa.
Iyadoo aan la xaddidin waxyaabaha kor ku xusan, Shirkad ama shirkad bixiyaheeda midkoodna ma samaynayo wax matalaad ah ama damaanad qaad nooc kasta ah, muujiyo ama tuso: (i) sida hawlgalka ama helitaanka Adeegga, ama macluumaadka, nuxurka, iyo agabka ama alaabada waxaa ka mid ahaa; (ii) in Adeeggu noqon doono mid aan kala go 'lahayn ama aan khalad lahayn; (iii) sida saxda ah, isku halaynta, ama lacagta wixii macluumaad ah ama nuxur ah ee lagu bixiyo Adeegga; ama (iv) in Adeegga, adeegeyaasheeda, waxyaabaha ku jira, ama e-mayllada laga soo diray ama loo wakiishay Shirkadda ay ka madax bannaan yihiin fayrasyo, qoraallo, fardaha Trojan, dixiriga, malware, timebombs ama waxyaabo kale oo waxyeello leh.
Shuruucda qaarkood uma oggolaanayaan ka saarida noocyada damaanad qaadka ama xadaynta xuquuqda qaanuuniga sharciga ah ee macaamilka, sidaa darteed qaar ama dhammaan ka-saaritaannada iyo xaddidaadaha kor ku xusan ma quseynayaan Adiga. Laakiin kiisaska noocaas ah ka-saaridda iyo xaddidaadaha lagu qeexay qaybtan waxaa lagu dabaqi doonaa heerka ugu badan ee lagu fulin karo marka la eego sharciga ku habboon.
Shuruucda dalka, marka laga reebo khilaafkeeda qaanuunka sharciga, waxay maamuli doonaan Shuruudaan iyo Adeegsigaaga Adeeg. Isticmaalkaaga dalabka waxaa sidoo kale lagu soo rogi karaa shuruucda kale ee maxalliga ah, gobolka, dalka, ama caalamiga.
Haddii aad wax walaac ama muran ka qabtid Adeegga, Waxaad oggolaatay inaad marka hore isku daydo inaad xalliso khilaaf aan rasmi ahayn adoo la xiriiraya Shirkadda.
Loogu talagalay Isticmaalayaasha Midowga Yurub (EU)
Haddii aad tahay macmiil midowga yurub ah, waad ka faa iidaysan doontaa qodobo kasta oo qasab ah oo ka mid ah sharciga wadanka aad ku nooshahay.
U hogaansanaanta Sharciga Mareykanka
Waxaad matashay oo damaanad qaadaysaa (i) In aadan ku sugnayn waddan ay ku xiran tahay cunaqabateynta dowladda Mareykanka, ama taas oo ay dowladda Mareykanka u magacowday "taageer argagixiso", iyo (ii) Ma tihid ku taxan liis kasta oo dawladda Mareykanka ka mid ah oo ka mid ah dhinacyada reebban ama xaddidan.
Qabashada iyo Ka-dhaafitaanka
Haddii qodob kasta oo ka mid ah Shuruudahan loo habeeyo inuu yahay mid aan loo dulqaadan karin ama aan ansax ahayn, bixinta noocaas ah waa la beddeli doonaa oo loo tarjumi doonaa in lagu fuliyo ujeeddooyinka bixinta sidan oo kale ah illaa inta ugu badan ee suurta gal ah ee hoos imanaya sharciga ku habboon qodobbada harayna waxay ku sii socon doonaan si buuxda oo fulin ah.
Marka laga reebo sida ku xusan halkan, ku guuldareysiga in la isticmaalo xuquuq ama u baahan in la fuliyo waajibaadka ku xusan Shuruudahaan ma saameyn doonto awoodda dhinac ee ku dhaqanka xuquuqdaas ama u baahan waxqabad noocaas ah waqti kasta oo intaa ka dambeeya mana noqon doonto ka tanaasulka jebintu inuu noqdo ka tanaasulid wixii jebin ah ee xigta.
Shuruudahaan iyo Shuruudahaan waxaa suuragal ah in la tarjumay haddii aan adiga kuugu soo bandhigno Adeeggeenna. Waxaad ku raacsan tahay in qoraalka asalka ah ee Ingiriisiga uu ku guuleysan doono haddii uu jiro khilaaf.
Isbedelada Shuruudahaan iyo Shuruudahan
Waxaan xaq u leenahay, go'aankeena kaliya, inaan wax ka bedelno ama ku bedelno Shuruudahaan waqti kasta. Haddii dib-u-eegiddu ay tahay mid wax ku ool ah Waxaan sameyn doonnaa dadaal macquul ah oo aan ku bixin doonno ugu yaraan 30 maalmood ogeysiis ah ka hor intaan ereyo cusub oo cusub dhaqan gelin. Waxa ka kooban isbeddel maadi ah ayaa lagu go'aamin doonaa Qiyaasteena keliya.
Markaad sii waddo marin u helka ama adeegsiga Adeegyadeena ka dib markii dib-u-eegistani ay dhaqan gasho, Waxaad oggolaatay inaad ku xidhnaato shuruudaha dib loo eegay. Haddii aadan ku raacsaneyn shuruudaha cusub, gabi ahaan ama qeyb, fadlan jooji isticmaalka bogga iyo Adeegga.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan Shuruudaan iyo Shuruudahan, Waad nala soo xiriiri kartaa:
Email ahaan: [emailka waa la ilaaliyay]